K-Dramas တွေထဲမှာ Chemistry အမိဆုံးဖြစ်တဲ့ Second Lead Couples7တွဲ
K-Dramas တွေထဲမှာ Chemistry အမိဆုံးဖြစ်တယ်လို့ ဖော်ပြခြင်းခံထားရတဲ့ Second Lead Couples7တွဲကို ဖော်ပြပေးလိုက်ပါတယ်။ ဒီထဲမှာ ကိုယ်သဘောကျတဲ့ အတွဲလေးရောပါမလား၊ ကိုယ်လည်း Chemistry မိတယ်လို့ ထင်ထားတဲ့အတွဲလေးရော ပါမလားဆိုတာကို ကြည့်လိုက်ရအောင်….
1. Sunny နဲ့ Grim Reaper
“Goblin” ထဲမှာ Sunny (Yoo In Na) နဲ့ သေမင်း Grim Reaper (Lee Dong Wook) တို့က ဘယ်လောက် Chemistry မိတဲ့ Second Lead Couple ဖြစ်လဲဆိုတာကို Goblin ကြည့်တဲ့သူတိုင်း သိမှာပါ။ Main Lead Couple အဖြစ်နဲ့ “Touch Your Heart” ထဲမှာဆို ပိုတောင်လိုက်ဖက်ပြီး Chemistry မိနေပါသေးတယ်။
2. Lee Young Hwa နဲ့ Seo Dan Ah
နောက်ထပ် Chemistry အမိဆုံး Second Lead Couple ကတော့ “Run On” ထဲက Lee Young Hwa (Kang Tae Oh) နဲ့ Seo Dan Ah (Sooyoung) တို့ပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
3. Yoon Myung Joo နဲ့ Suh Dae Young
“Descendants of the Sun” ထဲက Yoon Myung Joo (Kim Ji Won) နဲ့ Suh Dae Young (Jin Goo) ဆိုရင် ဇာတ်ကားစပြထဲက ပရိတ်သတ်တွေ အရမ်းသဘောကျခဲ့ရတဲ့ Second Lead Couple ပါ။ အရမ်း Chemistry မိပြီး လိုက်ဖက်နေတာကြောင့် တချို့ပရိသတ်တွေဆိုရင် Main Lead ထက် သူတို့ကို ပိုပြီးသဘောကျခဲ့ကြတာပါ။
4. Cha Sung Hoon နဲ့ Jin Young Seo
“A Business Proposal” ထဲက Second Lead Couple ဖြစ်တဲ့ Cha Sung Hoon (Kim Min Kyu) နဲ့ Jin Young Seo (Seol In Ah) တို့ကတော့ Chemistry အရမ်းမိတယ်ဆိုတာက ဒီ Drama ကြည့်တဲ့သူတိုင်း သိမှာပါ။ ပရိသတ်တွေ အရမ်းသဘောကျရတဲ့ Second Lead Couple ပါပဲ။
5. Lee Ji Yi နဲ့ Yoo Chang Soo
“High Society” ထဲက Lee Ji Yi (Lim Ji Yeon) နဲ့ Yoo Chang Soo (Park Hyung Sik) တို့ကလည်း Chemistry အမိဆုံး Second Lead Couple ထဲမှာ ပါပါတယ်။
6. Cha Hyun နဲ့ Seol Ji Hwan
“Search: WWW” ထဲမှာဆိုရင် Cha Hyun (Lee Da Hee) နဲ့ Seol Ji Hwan (Lee Jae Wook) တို့က အရမ်း Chemistry မိကြတဲ့ Secong Lead Couple လေးတွေပါ။
7. Gu Seung Jun နဲ့ Seo Dan
“Crash Landing On You” ထဲက Gu Seung Jun (Kim Jung Hyun) နဲ့ Seo Dan (Seo Ji Hye) တို့ဆိုရင် အရမ်း Chemistry မိလွန်းလို့ ကြည့်တဲ့ပရိသတ်တွေ သဘောကျခဲ့ရတဲ့ Second Lead Couple ပါပဲ။
MyStyle Myanmar2022-05-30T08:14:03+06:30May 31st, 2022|Celebrity News, Entertainment, Stars & Style|